FADEEXAD: Agaasimaha Guud Ee Wasaaradda Arimaha Gudaha Oo Warqad Madaxweyne Oo Been Abuur Ah Sameeyay Kadibna U Diray Hey’adaha Caalamiga Ah | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka FADEEXAD: Agaasimaha Guud Ee Wasaaradda Arimaha Gudaha Oo Warqad Madaxweyne Oo Been...
FADEEXAD: Agaasimaha Guud Ee Wasaaradda Arimaha Gudaha Oo Warqad Madaxweyne Oo Been Abuur Ah Sameeyay Kadibna U Diray Hey’adaha Caalamiga Ah
Warqada hoos ku xusan oo aan ka helnay qaybo kamid ah hey’adaha caalamiga ah waa warqad foojeri ah, waxaana sameystay Agaasimaha Guud ee Wasaarada Arimaha Gudaha Maxamed Cali Nuur Jubba, wuxuuna taariikhdeeda ka dhigay October 28, 2018. Mr. Juba wuxuu warqadan foojariga ah hey’adaha caalamiga ah u diray April 1, 2019 xilligaas oo ahayd markii ay taagnayd masaafurinta Itoobiyaanka, isaga ayaana si rasmi u diray, wuxuuna warqada ku qoray in mas’uuliyada arrimaha muhaajiriinta iyo tahriibka ay mas’uul ka tahay wasaaradu. Mas’uuliyadaas oo uu horay Madaxweyne Gaas u igmaday Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda si aad hoos ku arki doontaan.
Falanqeynta Warqadda Been Abuurka ah
Warqadda been abuurka ah waxa lagu taariikheyey tahay October 28, 2018 waxaana lagu saxiixay Madaxweynihii hore Dr. Cabdiweli. Waxaa Hey’adaha Caalamiga ah loo diray April 1, 2019, waxaana kamid ah hey’adaha loo diray IOM (Miski Maxamed, M. Seed, Cabdirisaaq iyo Amy), UNHCR (Maxamed Saalax, Zeynab Suleyman iyo Josep Varnie), UNICEF (Maxamud Cali Yusuf iyo Fadumo Xandule), DRC (Felis Matan iyo Cabdicasis Xamud) iyo MRC (Maxamud Shiikh Ciid). Mr. Juba markuu dirayey wuxuu ogeysiin siiyey Wasiirka wasaaradda Dhabancad taasoo ka dhigan inuu la og yahay arintaan.
Midabka farta warqada foojariga ah waxaa laga dhigay buluug xigeen si ay ugu ekaato saxiixa lasoo jaray, mana jiraan warqado midabkaas ku qoran oo ay madaxtooyadu soo saarto inta badan midabka warqaduhu waa madow.
Sida aad ku aragti doontan falanqeynta ay hey’aduhu ku sameeyeen warqadda foojariga ah, qoraalka warqadda oo dhan waxaa kujira khaladaad dhanka luuqada, erayada iyo dhigista ah. Khaladka ugu weyn waa magaca Hey’adda Socdaalka oo loo qoray si khaldan waxaana laga dhigay (Immigration and Neutralization Agency) taasoo noqoneysa Wakaaladda Socdaalka iyo Ka Hortegista, halka magaca saxda ah ee hey’adaas uu yahay (Immigration & Naturalization Directorate) oo noqoneysa Agaasinka Socdaalka iyo Jinsiyadda.
Qoraalka labada hey’adood midna waxaa lagu qoray far waaweyn midna far yar-yar.
Warqadda foojariga ah waxaa lagu bilaabay sida lagu qeexay Xeerka Qaxootiga Puntland, lamana xusin qoddobka ama farqada, sida runta ahna Xeerka Qaxootiga kama hadlo wax khuseeya arrimaha muhaajiriinta laakiin keliya wuxuu xeeriyaa arrimaha qaxootiga ku xeeran.
Warqada foojariga ah waxay ka hor imaaneysaa warqadan hoose oo uu madaxweynuhu soo saaray August 27, 2018 taasoo shaqada muhaajiriinta sharci darada ah loogu igmaday Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyada. Laguma xusin warqada foojariga ah in laga noqday warqadan.
Saxiixa iyo qoraalka warqada foojariga ah waxaa laga soo jaray warqadan hoose oo uu qoray Madaxweynaha Puntland oo summadeedu tahay MW/DPS/708/2017 kuna taariikheysan 20/12/2017 kuna saabsan in maamulka abaaraha lagu wareejinayo Wasaarada Arimaha Gudaha, waana warqad saxan oo si sharci ah uga soo baxday Madaxtooyada lagana helayo Keydka Madaxtooyada (Archives).
Warqadan waxay lahayd ujeedada (Mandate Clarification) halka isla mida foojariga ahna lasiiyey isla ujeedadaas.
Saxiixa iyo shaabada warqada foojariga ah waa daciif, si aad u ogaato in saxiixa warqada kore iyo mida foojariga ah iskumid yihiin waxaan isku keenay warqada foojariga ah iyo mida saxiixa laga goostay. Hadaba, si fiican u fiiri qaabka saxiixa iyo magaca madaxweynaha isku saaran yihiin, saxiixu meeshu ka saaran yahay xarfaha iyo weliba qaabka istaambada. Waxaad sidoo kale eegtaa midabka iyo hab-qoraalka warqada saxda ah ee laga goostay saxiixa oo ku tusineysa inaysanmadaxdooyadu soo saarin warqad midabka farteedu yahay buluug xigeen.
Hey’adda Socdaalka oo ay warqadani qayb kamid ahi khuseyso lama siin ogeysiin loomana dirin sida ay noo sheegeen. Hadaba, qof hey’adaha kamid ah ayaa ka codsaday Agaasimaha Madaxtooyada inuu u xaqiijiyo warqada foojariga ah, waxayna isdhaafsadeen emailada soo socda, wuxuuna Agaasimuhu u xaqiijey ineysan warqadaas qorin, kuna jirin arkiifiyada.
Hey’adaha caalamiga ah oo warqadan loo soo diray ayaa markiiba fahmay in warqadu tahay been abuur, waxaana jira nidaam lagu hubiyo warqadaha been abuurka ah waana tan hoos ku lifaaqan iyagoo falanqeyn ku sameeyay iskuna diray si loo ogaado inay foojari tahay. Laakiin waxaa Hey’adaha Caalamiga ah layaab ku noqotay in warqadan been abuurka uu soo diray sarkaal dowladeed, qofka laga been abuurtayna yahay madaxweynihii wadanka. Sidoo kale, ay arintani dowladda ku keeni karto jaahwareer, buuq iyo fowdo iyo in si fudud loo sameysto warqado been abuur ah.
Saameynta ay arintani keeni karto:-
In lagu dhiirado been abuurka warqadaha dowladda madaama lagu been abuurtay madaxweynihii laftigisii, taasoo fowdo iyo jaahwareer usoo jiideysa wadanka.
In dad badan sameystaan warqado been abuur oo loo tiiriyo madaxweyneyaashii hore ee Puntland soo maray ayna abuurto buuq badan.
In hey’adaha caalamiga ah iyo dadkuba ku kalsoonaan waayaan warqadaha dowladda.
Sidaas darteed, waxaa la gubdoon Madaxweynaha Dowladda Puntland iyo weliba hey’adaha sharci ilaalinta in dembigan culus lagu sameeyo baaritaan kadibna tallaabo laga qaado qofkii ka danbeeyay been abuurkaas lana tuso dadka Puntland iyo hey’adaha caalamiga ah inay kalsooni ku qabaan nidaamka dowladda.
FG: Warqadda been abuurka ah ,midda laga koobiyeyay iyo Jawaabihii hayaduhu soodireen dhamaan hoos ayaan kusoo Lifaaqnay.
Xigasho Shaaciyo news